Shirkada Saxansaxo Group oo ku Soo Bandhigtay alaabta ay Soo Saarto Bandhigga Carwada Warshadaha | Hargeysa World~Herald
UncategorizedShirkada Saxansaxo Group oo ku Soo Bandhigtay alaabta ay Soo Saarto Bandhigga Carwada Warshadaha
Shirkadda sharaabka iyo biyaha ee Soda King loona yaqaano Saxansaxo Group, ayaa carwada ganacsiga ee sanadkan ku soo bandhigtay alaabada kale duwan ee ay soo saarto. Shirkadda oo ah shirkad waddani ah oo ku taala magaalada Burco ayaa si ballaadhan uga qayb qaadatay carwada ganacsiga warshadaha ee ka socoto Tiyaatarka Magaalada Hargeysa.
Muuse Maxamed Cismaan oo ah qaybta suuqgeynta ee shirkdaa oo shabakadda wararka ee Hargeysa Herld la hadlay ayaa ka warramay waxyaabaha shirkaddu soo saarto.
“Waxaanu kaga soo qayb galnay ka shirkad ahaan, shirkadda soo saarta sharaabka ee Soda King iyo Saxansaxo Mineral Water”, Muuse Maxamed, madaxa suuqgeynta shirkadda.
Shirkadda ayaa samaysay qiima dhimis buuxda inta ay socoto bandhigan carwada warshaduhu.